Hlanza umlando we-Git > UVielhuber David
Hlanza umlando we-Git09
Imininingwane ebucayi njengamaphasiwedi kufanele ibe kumafayela e-.env futhi, uma kungenzeka, ingagcini ezinqolobaneni zeGit. Kepha kungenzeka ukuthi kwenzeke kithi ngamunye okungenani kanye ngephutha: Ishicilele ngokushesha umbhalo omuhle weGoogle Maps JS API ku- GitHub Gists ("njengomphakathi") ngaphandle kokufihla ngephutha ukhiye wethu we- Maps API oyimfihlo.
Ngenhlanhla, iqembu elinakile le-Google Cloud Platform Trust & Safety lisanda kuqala ukuthinta iminwe yakho ngama-imeyili azenzakalelayo angagcini ngokuthungatha i-github.com okhiye be-API yomphakathi ngezinga elikhulu:
sithole ukhiye we-Google API ofinyeleleka esidlangalaleni ohlotshaniswa nephrojekthi ye-Google Cloud Platform elandelayo:
Lapho-ke sekuyisikhathi sokuthatha isinyathelo maduzane. Ngenhlanhla, ne-Git iyathethelelwa. Umbhalo olandelayo we-bash usebenzisa i- BFG cleaner enkulu (cha, lokhu akusho ukuthi isikhali esivela ku-DOOM) futhi kususa ukhiye we-API kulayini 5 weGit repository kulayini 6:
PS: Ukhiye we-API kulayini 5 uyihlaya.